မက်ဆီ ၊ စီရော်နယ်ဒို ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကကို နေမာနဲ့ အမ်ဘာပီ ဦးဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ြေ?? - Yangon Media Group
ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်သူ ဇာဗီးသည် လက်ရှိဘောလုံးလောက၏ အကြွင်းမဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားများအဖြစ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အကောင်းဆုံးဆုများအား အလှည့်ကျရယူလျက်ရှိသည့် မက်ဆီနှင့် စီရော်နယ်ဒိုတို့က ဦးဆောင်နေခဲ့သော်လည်း နောင်တစ်ချိန်တွင် နေမာနှင့် အမ်ဘာပီတို့အလှည့် ရောက်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဥရောပအသင်းကြီးများ၏ မျက်စိကျခြင်း ခံနေရသည့် ပြင်သစ်လူငယ်တိုက်စစ်မှူး အမ်ဘာပီနှင့်အတူ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ကြေး အမြင့်ဆုံးကစားသမားဖြစ်သူ နေမာတို့သည် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းတွင် အတွဲအဖက်ညီညီ ကစားနိုင် ခြင်းများကြောင့် ဇာဗီက ယခုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုသုံးသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်ဒိုသာ အသက်အရွယ်ပိုင်းအရ ဘောလုံးလောကကနေ တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာရမယ့်အချိန်တွေမှာ နေမာအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ပါမှာပါ။ ထိုနည်းတူ လူငယ်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အမ်ဘာပီကလဲ နေမာနည်းတူ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဆုတွေကို ဖမ်းစားနိုင်မယ့်သူလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန် ဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆုတွေကို နေမာနဲ့အမ်ဘာပီတို့ အလှည့်ကျ အသုံး တော်ခံပါလိမ့်မယ်”ဟု ဇာဗီက ၏အမြင်ကို ထုတ် ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားရုံးမှ ချမှတ်သည့် ပြစ်ဒဏ်အား ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက်စတိုးဆိုင် ဝ??
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် မြွေနှင့်ကျေးငှက်များဖမ်းပြီး စီးပွားရှာစားသောက်မှုများကြော?
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် လူထုကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နိုင်ကြော??